Search results for "औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख"
केना₂ [kena] वि. 1लामो long, extensive
(sem. domains: 8.2.2 - लामो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.1.1.3 - ग्रह.) 2अग्‍लो high, tall
(sem. domains: 8.2.2.2 - अग्‍लो, 1.2.1 - जमिन.)
केमा [kema] क्रि. 1तान लगाउनु to cause to pull (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.) 2लामो हुनु to be long (sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains:5- दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.) 2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to writeacheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
बेङ्‌ना [beŋ‌na] वि. 1चेप्‍टो flat, smooth
(sem. domains: 8.3.1 - आकार, 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो, 1.1 - आकाश.) 2फराकिलो wide, extended, extensive
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
राम्‍मा [ram‍ma] क्रि. 1माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 5.6 - सफा गर्नु.) 2रगड्‍नु to rub, to scour
(sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
सोट्‌ना [soʈ‌na] ना. 1लाम्‍चो lengthy, stretched oneself out
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2सीधा straight
, gentle, mild, quiet, straight, erect, upright, simple, plain, innocent, straightforward, in front (of), uncooked grain (as given to Brahmans, or to wandering ascetics), quantity of uncooked grain
(sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.) 3चिप्‍लिने
हेक्‍ना [hek‍na] ना. 1बाङ्‍गो bent, crooked, twisted
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2टेढो crooked, bent, curved, awry